posted on November 19, 2018 December 29, 2018 yi ALPPM
2Ukuzisa phezu kwetafile
5Food Grade Materials
6Production wokuvavanya ulwazi
8.1 PVC Plain
8.4 PVC-U, PVC-M, kunye PVC-O
9.2 Simple lezilwanyana-nentlaka
Sinako ukubonelela abaxumi bethu ezinokuba bulk, ngemiyinge emincinci, kunye PVC ihoseyile, PET, PP izinto kunye nomgangatho kumazwe elungileyo kunye nesithembiso siko eyenziwe impahla.
production wokuvavanya ulwazi
FUNDA Which Shape Should I Use for Plastic Packaging Boxes (Pros & Cons)
Siye afakelelwe mqukumbelo engaphakathi izixhobo zethu eziyi- kunye izinto kunye iHDPE (lwetshiphu emsebenzi-Polyethylene) elakha ukuba umphezulu egqwesileyo zokhuselo kwaye akavumeli baxube ukutya okanye ezinye izinto zisetyenziswa kushishino.
Le Ukufikisa best yeplastiki ngaphakathi imibhobho kuvumela abathengi ukuba uzisebenzise ngaphandle koloyiko nokwandisa ishishini labo ngobuninzi mveliso.
Abekwe e China, kwafuneka ukuba aye ngokusebenzisa inkqubo isityhwentywe semali nende okufumana iimvume eziyimfuneko wonke umsebenzi osemthethweni ngokuthenga / mveliso imathiriyeli igiza apha e-China.
Ngoku, thina ukuba imise kwaye evelisa ngesantya ngokukhawuleza nayo yonke imihla oludlulayo. Thina zikwimeko ukubonelela abaxumi bethu nabo bonke ubukhulu komyalelo njengoko ebona kufanelekile ishishini labo.
Ezi zenziwa up ngokusebenzisa elula iikhemikhali ukwakhiwa Polyvinyl chloride kwaye ayafikeleleka kakhulu, ukukhanya ubunzima kunye ukumelana umhlwa. Baye i parameter umdla eqhotyoshelwe kubo umthamo wabo umqolo uninzi lwabo basebenzisa iinkonzo zakho ezifana nemibhobho yamanzi kunye nabakhi bekuya uthanda.
Baye imvelo thermostatic, nto leyo ethetha ukuba ingasetyenziswa phantse zonke iintlobo bume.
CPVC kuthetha ikhlorini PVC, kuba amanqanaba aphezulu iklorin elungisiweyo zonke yesakhiwo kwaye zingasetyenziswa phakathi ezahlukeneyo zamashishini ezifana nokutya, ezolimo, kunye namalaphu. Kwakhona, la ngokulula ukumelana spectrum ezibanzi kwamaqondo obushushu.
UPVC imela PVC un-plasticized kwaye ngqongqo ngakumbi ukusilela kwebala lwabo bhetyebhetye. Ezi imibhobho okanye izinto asetyenziswa sothutho inkunkuma amanzi.
PVC-U, PVC-M, kunye PVC-O
FUNDA Attractive Plastic Cookies Packaging Box Design Tutorial
Pet xa ekujongwe ukuba isetyenziswe eyolukiweyo ibizwa ngokuba ipholiyesta, uyifumane isebenzisa yayo textile ezahlukeneyo kunye nezicelo zoshishino. Ingasetyenziswa nokulungiselela amalaphu, amalaphu aqhelekileyo wawutyabeka kananjalo kwi ukusekelwa yeplastiki Ukunciphisa amandla high parameter.
Xa Pet isetyenziswa ukutya okanye isiselo amashishini equlathe iimveliso ezahlukeneyo, ngoko ke ubizwa lezilwanyana-nentlaka. Oku kusetyenziswa ekwenzeni izinto ezahlukeneyo kunye nezixhobo ezifana neebhotile zeplastiki, izikhongozeli ulwelo ixhaphake phakathi amashishini ukuphakheja ezahlukeneyo.
Pet-P yi kunokuba sofakelo olutsha ngaphakathi usapho PET kwaye isetyenziswe ukuvelisa kwimicu okanye izinto ezinxulumene kwi eyolukiweyo kunye cotton shishino.
Ngamanye amaxesha Pet-P yahlulahlulwe ifayibha bacoleke imisonto yaye lisetyenziswa unezixhobo ezininzi anikwe amandla eyongezelelweyo kwaye ihlala iparashute, kunye amalaphu ezinxulumene nazo ziqulathe amaqhezu ye PET-P polyethylene terephthalate.
izinto Polypropylene ekrwada ukuba iiplastiki, sisebenzisa yoqwalaselo eyahlukileyo iiplastiki ezinepolypropylene ukuvelisa imiba eyahlukeneyo kubathengi lethu lixabisekileyo, ngokuxhomekeke phezu abalukhethayo.
Yeyona candelo ezinepolypropylene ezininzi ezisetyenziswayo kakhulu nesetyenziswa ukuba izisombululo zeplastikhi ngeendawo kumhlaba wonke. Uyifumane isicelo yayo ukupakisha, elukiweyo, ezempilo, imibhobho, izithuthi kunye izixhobo zombane.
Le ibandakanya propylene monomer kwi semi-crystalline ifomu esiqinileyo.
FUNDA Best Clear Plastic Ibhokisi Packaging Umthengisi & yoMvelisi
Kwakhona, singabantu abenzi inkulu zokubopha imveliso kunye imibhobho kuzo zonke Asia ngokusasaza ukufikelela zethu ngokubonelela ukuzinikela umgangatho imveliso leyo sinikeza.
This entry was posted in Packaging plasticnoqhotyosho CPVC, impact copolymer, PET , Polyester, Polyethylene terephthalate, polypropylene, Polyvinyl Chloride, PP , Propylene Homopolymer, PVC , PVC factory, PVC material factory, izinto zokwenza imveliso , raw material factory, UPVC.
Best Paper Packaging Factory & yoMvelisi
# 2019 Product Cosmetic Packaging Trend ka-Design kunye nezinto 114 views
Metalized Pouches Vs ngefoyile ye Pouches: Yiyiphi Kungcono? 77 views
Coffee Bags Design Trends: How to Make a Beautiful Bag? 66 izimvo